Bhinzi dzakasvibira nenjodzi uye zai rakachekwa | Kicheni Mapepa
Bhinzi dzakasvibira nehukupei uye zai rakachekwa
Iyi ndeimwe yeaya mapepeti anokutendera kuti unakirwe nekudya pamwe chete dhishi. Iyo bhinzi dzakasvibira pamwe nenjere Kuti nhasi ini ndinokumbira kwauri, zvakare anosanganisira akachekwa akabikwa zai uye nhevedzano yezvinwiwa zvinowedzera kuravira kune iyo yese. Uchavafarira! Ndine chokwadi.
Iyo iri yakapusa uye yakanaka dhishi ye zadzisa menyu menyu. Uye ini ndinogona kuva zvakanyanya kunyanya kana iwe ukashandisa makedheni akabikwa makaka, chigadzirwa chandinogara ndiinacho mupantry kunyangwe zvakajairwa, uye sezvandakaitira iripi iyi, dhonza chickpeas muhuwandu uye nekukurumidza mubiki.
Unoziva zvandinoda sanganisira iyo paprika kune angu mabikirwo, ese ari maviri anotapira vhezheni uye yayo inonaka vhezheni. Kana uchiifarira, enda kumberi! Kana iwe uchida zvimwe zvinonhuwira, iva wakasununguka kuzvitsiva. Chishoma che turmeric kana curry chinogona zvakare kuenda zvakaringana mune ino kamukira yegreen bhinzi ne chickpeas.
Iyi yegayi bhinzi dhishi ine nhokwe uye zai rakatemwa rakanakira kupedzisa menyu yako panguva ino yegore.
80 g. mbishi yakasvibira (yakanyoroveswa)
320 g. bhinzi yegirini
2 mazai akabikwa
Mune yekumanikidza yekubika ine yakawanda mvura uye munyu tinobika nhokwe kwemaminetsi makumi maviri neshanu kana makumi mashanu. Kana tangobika, tinovadurura, tichichengeta muto kune kumwe kugadzirira.
Mushure mezvo, tinosuka bhinzi dzakasvibira nekubvisa iwo matipi uye tinotemha kuvabikira. Zvichienderana nerudzi rwebhinzi uye nekuravira kwako, iyo nguva ichasiyana. Mune yangu yaive maminitsi gumi. Kana zvangobikwa tinovabvisa.
Sakanidza bhinzi dzakasvibira neichickpeas uye mwaka nemafuta anodonha yemhandara yemiorivhi, teaspoon yepaprika, munyu wemunyu uye imwe mhiripiri nhema. Sanganisa zvakanaka uye pamusoro nezai rakabikwa rakabikwa.
Isu tinoshumira bhinzi dzakasvibira nemachipisi anopisa, anodziya kana anotonhora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Vegetable Recipes » Bhinzi dzakasvibira nehukupei uye zai rakachekwa
Mbatata uye hake stew
Chokoreti chip makuki nenzungu